အပူပိုင်းမုန်တိုင်း Claudette ကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ Alabama ပြည်နယ်၌ လူ ၁၄ ဦး သေဆုံး ၊ မုန်တိုင်းက ပင်လယ်သို့ ဦးတည်ထွက်ခွာ - Xinhua News Agency
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း Claudette တိုက်ခတ်မှုကြောင့် အပျက်အစီးများအား တွေ့ရစဉ်(ဓာတ်ပုံ - အင်တာနက်)
ဝါရှင်တန် ၊ ဇွန် ၂၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုများ ၊ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုများနှင့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း Claudette ကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ Alabama ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင် လူ ၁၄ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား ပြည်နယ်ကမ်းခြေသို့ဝင်ရောက် တိုက်ခတ်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။“အပူပိုင်းမုန်တိုင်း Claudette မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား ပြည်နယ်ကမ်းခြေမှာ ဒီမနက်ပိုင်း ထွက်သွားမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ အဲဒီနောက်ပိုင်း အများအားဖြင့် နေသာမယ့် အခြေအနေ ရှိပါတယ်။”ဟု Morehead မြို့ရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံ အမျိုးသားအဆင့် ရာသီဥတုဌာနရုံးက ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် တွစ်တာစာမျက်နှာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း Claudette သည် ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် အများဆုံး စဉ်ဆက်မပြတ် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် မိုင် ၄၀ နှုန်းအထိ ရှိခဲ့ကြောင်း အမျိုးသားဟာရီကိန်းစင်တာက ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် ရာသီဥတုဌာနက မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းနေရာများတွင် ရုတ်တရက်ရေကြီးမှု သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ယင်းနေရာများရှိ ကမ်းခြေများစွာသည် ဆွဲချသောရေစီးကြောင်းများ၏ အန္တရာယ် အမြင့်မားဆုံး ရှိနေကြောင်း USA Today ၏ ဖော်ပြမှုအရ သိရသည်။
မုန်တိုင်းအတွင်း Alabama ပြည်နယ်၌ လူ ၁၄ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ပြီး ဇွန် ၁၉ ရက်တွင် Butler ကောင်တီ၌ မော်တော်ယာဉ် တိမ်းမှောက်မှုများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် ဖခင်တစ်ဦး နှင့် ကလေးငယ် ၉ ဦးပါဝင်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Butler ကောင်တီသေမှုသေခင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိ Wayne Garlock က ယင်းမော်တော်ယာဉ်များသည် မြစ်မှစီးဆင်းလာသော ရေကြီးမှုကြောင့် လမ်းမပေါ်တွင် ပေါလောမျောပါသွားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အတူ Alabama ပြည်နယ် Birmingham မြို့၌ ရေကြီးရေလျှံမှုများအတွင်း အသက် ၃၁ အရွယ်ရှိသူ Timothy Bragg သည် ပြုတ်ကျသေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
လေပြင်းရာသီသည် ခြောက်နှစ်ဆက်တိုက် ပုံမှန်ထက် ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှု ပိုမို မြင့်မားသည့် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ အမျိုးသားအဆင့် သမုဒ္ဒရာ နှင့် လေထု လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ USA Today က ဖော်ပြခဲ့သည်။ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် ၃၉ မိုင် သို့မဟုတ် မြင့်မားစွာ တိုက်ခတ်သော အပူပိုင်းမုန်တိုင်းများနှင့်အတူ မုန်တိုင်း ၂၀ကျော်ထိ တိုက်ခတ်နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားသည်။
မုန်တိုင်းများသည် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် ၇၄ မိုင် ရောက်ရှိချိန်တွင် ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းအဖြစ် ရောက်ရှိလာကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Tropical storm Claudette heads out to sea after leaving 14 dead in U.S. Alabama
WASHINGTON, June 21 (Xinhua) — With strong winds and heavy rains, tropical storm Claudette roared off the coast of U.S. state North Carolina on Monday, after leaving at least 14 dead in southern U.S. state Alabama.
“Tropical Storm #Claudette will exit off the NC coast this morning, with mostly sunny conditions expected behind her,” The U.S. National Weather Service office in Morehead City tweeted on Monday.
However, the weather service issued flash flood warnings in parts of eastern North Carolina, whereahigh risk of rip currents was posted for several beaches, saidaUSA Today report.
At least 14 people were dead in Alabama during the storm, including nine children anda29-year-old father afteramulti-vehicle crash in Butler County on Saturday.
This hurricane season could bringarecord sixth consecutive year of above-normal activity, according to the USA Today report, citing the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration prediction of up to 20 named storms that will develop, starting with tropical storms driving wind speeds of 39 mph or higher.
Storms become hurricanes when winds reach 74 mph. Enditem